Sunday December 13, 2020 - 13:16:56 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadada xiriirisa degmooyinka Ceelbarde iyo Xudur ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal aad culus kaasi oo udhaxeeyay maleeshiyaadka maamulka Koonfur galbeed iyo ciidamo taabacsan wilaayada Islaamiga Bay iyo Bakool.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada jihaadiga ah ay weerar jidgal ah udhigeen kolonyo maleeshiyaad ah oo gelbinayay gaadiid sahay kasoo qaaday dhanka deegaanka Qurac Joome kunasii jeeday Xudur.
Wariye ku sugan gobolka Bakool ayaa SomaliMeMo khadka taleefanka ugu sheegay in 9 gaari lagu gubay dagaalka waxaana kamid ahaa gaadiidka loo yaqaan Cabdi Bilayaasha iyo kuwa xamuul ah oo sahay usiday dhanka xarunta gobolka Bakool.
Tobaneeyo askari ayaa la sheegay in ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerarka jidgalka ah ee isku bedelay dagaalka saacadaha badan qaatay, Al Shabaab ayaa sanaddii 2014 hareerayn adag kusoo rogtay ciidamada Itoobiya iyo Maleeshiyaadka la shaqeeya ee ku sugan degmada Xudur.
Ciidamada huwanta ah ayaa badanaa sahay gudbinta u adeegsada diyaarado balse marmarka qaar ayay isku dayaan in ay dhulka ku gudbistaan sahayda laakin waxay weeraro kala kulmayaan xoogaga jihaadiga ah.